रोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रहरीलाई मोटरसाईकल हस्तान्तरण – Radio Roshi
रोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रहरीलाई मोटरसाईकल हस्तान्तरण
in रोशी खबर / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	July 13, 2020
यश कुमार परियार–असार २९,
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले प्रहरीलाई मोटरसाईकल हस्ताण्तरण गरेको छ । आज एक कार्यक्रमका बिच गाउँपालिका अध्यक्ष डि.बि. लामाले ईलाका प्रहरी कार्यलयका प्रमुख ईन्पेक्टर धर्म जंग थिङलाई एक थान मोटरसाईकल हस्ताण्तरण गरेका हुन् ।
हस्ताण्तरण गरिएको मोटरसाईकल कटुञ्जेमा रहेको कटुञ्जे प्रहरी चौकीले प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ सय ५० सिसिको पल्सर मोटरसाईकल खरीद गरी गाउँपालिकाले हस्ताण्तरण गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष डि.बि. लामाले अग्रभागमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको निमित्त गाउँपालिकाले मोटरसाईकल गरीद गरी हस्ताण्तरण गरेको बताए । शान्ती सुरुक्षामा अहोरात्र खट्ने प्रहरी जुनसुकै समयमा जहाँ पनि जानुपर्ने हुनाले गाउँपालिकाले सहयोग गरेको बताए । गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउँदै आगामि दिनमा थप सहयोग गर्दै जाने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष डि.बि. लामा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहाल, ईलाका प्रहरी कार्यलयका ईन्सपेक्टर धर्म जंग थिङ साथै पालिकाका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।